Ọkụ Agbaa Ọnịtsha Pịatàà Dịka Ụgbọala Bu Mmanụ Dara, Gbagwòó
Previous Article Lawrence Ọnụchukwu Eguzobe Òtù Ọrụ Obi Ebere n'Ụkpọr
Next Article Ọba Akwụkwọ Anambra Na SSDO Emerùbe Ụbọchị Nwata Nwaanyị Na Mba Ụwa
Anyammiri gbara ka íju ụnyaahụ na mpaghara ebe dị iche iche n'Ọnịtsha dị na steeti Anambra, dịka otu nnukwu ụgbọ òlòko bu mmanụ ụgbọala darà wee gbagwòó, binwurukwa ọkụ ma gbaa ọtụtụ ebe na ọtụtụ ihe pịa pịa.
Ajọ ọkụ ọgbụgba ahụ bụ nke malitere na mpaghara Upper Iweka, bụ ebe ya bụ ebelebe nọrọ wee gbuo, tupuu ọ wee gbarazie nwusàba n'ebe ndị ọzọ dị iche iche.
Dịka onye ọnọ mgbe o mere siri wee kọọ, ebe dị iche iche ọkụ ahụ metụtara gụnyere ọdụ ahịa dị iche iche dị n'ime ahịa Ọchanja, isi njìkọ ụzọ Menax, bụ 'Menax Junction', Ọgbọ Akwụkwọ, ọdụ mmanụ ụgbọala dịgasị nso n'ebe ahụ, ụlọ obibi ndị mmadụ, tinyere ụfọdụ ebe ndị ọzọ.
N'okwu ya oge Ka Ọ Dị Taa kpọtụụrụ ya bànyere nke ahụ, onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uwe ojii na steeti Anambra, bụ Maazị Mọhammed Harụna kwètèrè na ya bụ akụkọ bụ ihe mere eme n'ezie, ma kwukwazie na a ka na-eme nnyocha bànyere ya bụ ajọ ọdachi.
Ya bụ ọkụ bụ nke gbàra ọtụtụ áwà, ma bụrụkwa nke tinyere ọtụtụ ndị mmadụ na nsogbu na n'ọnọdụ ezughị ike, dịka a hụgasịrị ka ọtụtụ n'ime ha na-agbagharị, na-achọgasị ebe ha ga-ekute mmiri ha ga-eji wee menyụọ ya, n'ihi na o nweghị onye ọrụ nsọnyụ ọkụ ọbụla a hụrụ n'okirikiri ebe ahụ oge ya bụ ihe na-eme, ma ya fọdụzie na o bughị mmiri. N'ihi ndị ọrụ nsọnyụ ọkụ anọghị nso oge ya bụ ọkụ binwùùrù, maọbụkwa ka ọ gachaara ụfọdụ oge o jiri malite, ya bụ ọkụ gbarikọrọ ma bibiekwa ọtụtụ ihe dị iche iche.
Dịka ọ dị na mgbe edemede akụkọ a, e nwebeghị onye kwuwara okwu ọbụla nwere ikike banyere mkpokọta ọnụ ego ihe ya bụ ọkụ bibìrì, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ ole tụfùrù ndụ ha na ya bụ ajọ ọdachi, bụ nke megoro ọtụtụ ugbòrò na steeti ahụ.